Madal Dib-u-eegista Ganacsiga oo leh Isdhexgal Bulsho: Pluck
Monday, July 2, 2012 Jimco, Juun 19, 2015 Douglas Karr
Iibsadayaasha internetka waxay doorbidaan inay ganacsi la sameeyaan ganacsatada ay ku kalsoon yihiin, iyo hagaajinta sumcadda sumcadda waxay u baahan tahay inay ahaato diiradda koowaad ee waxqabad kasta oo isgaarsiineed shirkadeed.
Dib u eegista macaamiisha ayaa ah qaab caadi ah oo waqti la tijaabiyay oo lagu dhisayo kalsoonida sumadda. Dib-u-eegidyadani waa inay ka tarjumaan waayo-aragnimada runta iyo runta ah ee macaamil soo iibsaday oo isku dayay badeecada ama adeegga. Laakiin su'aasha milyan-doollarka ah ayaa ah sida loo helo rajada laga qabo in la aammino in dib-u-eegaha uu dhab ahaantii yahay macmiil bixinaya dib-u-eegis dhab ah, oo aan ahayn suuq-geyn qarsoodi ah dacaayad been ah?
Tilmaamayaasha qaarkood waxaa ka mid ah:
Faahfaahin ka bixi fiiriyaha. In kasta oo ay suurtagal ahayn in la bixiyo macluumaadka xiriirka oo faahfaahsan, magaalada iyo gobolka qiimeeyaha, oo ay weheliso taariikhda wax iibsigu, waxay xoojin karaan dib u eegista
Kordhi awoodda warbaahinta bulshada. Fikradaha asxaabta, ama xitaa shisheeyaha khabiirku dhib malahan.
Macluumaad ku siiya rajada ka caawin karta inay xaqiijiyaan dib u eegista - daraasadaha kiisaska, dukumiintiyada farsamada, waraaqaha cad iwm.
Muuji dib u eegista ugufiican iyo cilmi baaris laxiriira barahaaga bulshada, kuna xooji doodaha, ra'yi dhiibashada iyo cusbooneysiinta.
Suuqleyda sidoo kale waxay isticmaali karaan aalado sida Faallooyinka Pluck, oo ah madal dib-u-eegis bulsho oo isku dhafan oo shirkadeed si loo wado kaqeybgalka howlaha.
Dib u eegista Pluck madalku waxay tilmaamaysaa macaamiisha habboon waxayna raadisaa ra'yigooda, iyadoo la siinayo xulashooyin ay ku soo rogaan sawirro iyo fiidiyowyo sidoo kale. Barxadda ayaa markaa si toos ah ugu daabacda dib-u-eegista marinnada horay loo xushay, waxayna u oggolaaneysaa xubnaha bulshada inay soo diraan ra'yi-celin, sidaas darteed waxay bilaabayaan wadahadal is-dhexgal ah oo ku siin kara xitaa aragtiyo dheeraad ah rajada. Suuqku wuxuu hayaa awoodaha dhexdhexaadka ah si loo hubiyo in wax walba ay ku sii jiraan gacanta. Falanqeeyaha ayaa sidoo kale helaya ikhtiyaarka ah inuu kula wadaago dib u eegista Facebook, Twitter iyo LinkedIn.
Si kastaba ha noqotee, su'aasha kalsoonida dib u eegista ayaa wali ah. Soo qaado Shaandheeyeyaasha Aaminaadda, aalad dareen leh, ayaa kaa caawin karta taas. Filters Trust waxay u oggolaaneysaa rajada daawashada dib-u-eegista si ay u aragto oo keliya dib u eegista ay soo gudbiyeen ilaha ay ku kalsoon yihiin, sida asxaabtooda Facebook, ama khubarada ay qadarinta u hayaan. Ganacsatada, Pluck waxay siisaa nidaam abaal marin dhammaystiran oo isku dhafan oo ka caawisa iyaga inay aqoonsadaan oo ay koolkooliyaan dib u eegis ku saabsan khubarada wax soo saarka iyo xubnaha kale ee saamaynta leh ee bulshada internetka ay u badan tahay inay aaminaan.
Suuqyayaashu si kastaba ha noqotee waxay u isticmaali karaan dib-u-eegista Pluck ujeeddooyin aad u ballaadhan marka loo eego si fudud qalab ahaan loogu daabaco dib-u-eegis lagu kalsoonaan karo. Tusaale ahaan, isku-darka 'Reviews Pluck' ee bogga wax soo saarka ee bogga, ama xitaa goob kale oo yar, waxay gacan ka geysaneysaa hagaajinta qiimeynta mashiinka raadinta.
Tags: dib u eegista macaamiishagoosashomadal dib u eegis
Ku wad Ka-qaybgal Widgets-ka Widgetbox